ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလား? - DVB TV News
ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလား?
Posted by Aliff on May 20, 2017 in DVB Debate, အထူးအစီအစဉ်များ
DVB BizDebate – ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာလား?
“စီးပွားရေးတိုးတက်ရင်ကော ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မလား။ အန်ကယ့်အမြင်ပေါ့နော်။ စီးပွားရေးတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်ပါတယ်။ အခုနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဆုတ်ယုတ်နေတယ်။ ဆုတ်ယုတ်နေတော့ ပြည်နယ်ကငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့ တွေက တိုးတက်မှုမရှိဘူး။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုက ညီညီမျှမျှနဲ့သာတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးသာ တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်”
– ဦးကျော်ဇေယျ(အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီ)
“ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို မြေပုံပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် သဘာဝသံယံဇာတနဲ့ အများကြီး ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားကိုက သံယံဇာတ အပေါ်မှာမှီခိုနေရတယ်။ အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက သံယံဇာတကရတာဖြစ် တယ်။ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးဘဲနဲ့ သံယံဇာတခွဲဝေမှုမညီမျှမှု ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က သံယံဇာတနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသွားလုပ်မယ်ဆိုရင် ရှိရင်းစွဲမကျေနပ်မှုတွေကို ပိုပြီးတော့ တိုးစေမယ်။ ဒီတော့ ပဋိပက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့စီးပွားရေးကို ဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့် အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ သတိပြုရဖို့ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက အဆင့်လိုက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြားကာလအချိန်ကြာပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းပြီလို့ထင်ပြီး သွားလုပ်တဲ့ အခါမှာ သံယံဇာတကို မကုန်မချင်းအပြိုင်တူးတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတက်တယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇နှစ်က မြန်မာပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးကို တွေ့ခဲ့ရလို့ သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းပါတယ်”
– ဦးမော်ထွန်းအောင်(Myanmar officer, Natural Resource Governance Institute)
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက ပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးက ရှိနေတယ်။ ဆိုလိုတာက မူးယစ်ဆေးဝါးက ရတဲ့ငွေတွေ၊ သံယံဇာတခွဲဝေထုတ်ယူမှုက ရတဲ့ငွေတွေရှိနေတယ်။ တရားမဝင်စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွေကရှိနေ တယ်။ အဲတော့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်က တရားမဝင်တဲ့နယ်ပယ်ကို ကျဉ်းအောင်နဲ့ တရားဝင်တဲ့နယ်ပယ် ကိုချဲ့အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်”
ဦးအောင်သူငြိမ်း(Director, Institute for Strategy and Policy Myanmar)
“ဒီသံယံဇာတတွေကို ခွဲဝေပေးတဲ့နေရာမှာ မျှမျှတတမခွဲဝေချင်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရအောင်ဖန်တီးနေတာလားဆိုတာဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရေမဆေးကျောက်တလုံးရခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီကျောက်ကိုတရားမဝင်နည်းလမ်းနဲ့ထုတ်သွားရင် နောက်ဆုံးမှာ အခွင့်ထူးခံတွေကဘဲ ရသွားတာပါ”
DVB TV – 18.05.2017